Meydka Wiil yar oo saddex sanno jir ah oo Dunida Ka Abuuray Naxdin iyo Qaylo Dhaan + VIDEO. |
Meydka Wiil yar oo saddex sanno jir ah oo Dunida Ka Abuuray Naxdin iyo Qaylo Dhaan + VIDEO.
Istanbul(GNN) Sawirka Wiil yar oo saddex sanno jir ah oo Xeebta Turkiga ku soo caaryay ayaa abuuray qaylo dhaan ku aadan siday u xumaatay xaaladda qaxoontiga ee Yurub. Baraha bulshada iyo warbaahinta ayaa si weyn loogu qaadaa dhigay arrintan murugada leh.
Warbaahinta ayaa wiilka yar u aqoonsatay in magaciisu yahay Aylan Kurdi, da’diisuna tahay 3 jir, waxaana sidoo kale kula geeriyooday doon la gadoontay walaalkii oo 5 sanno jir ah. Waxay saxaafaddu sheegtay in wiilkan yari ka yimid magaalada Kobane ee waqooyiga Suuriya,halkaasi oo dagaal ku dhex marayo Kooxda ISIS iyo Kurdiyiinta.
Waxa uu wiilkan yari ka mid ahaa dad doon ku safrayay badda oo ku sii jeeday waddanka Giriiga balse ay doontu la degtay. Waxa kale oo ku dhintay 5 caruur iyo haween iskugu jira. Ciidamada ilaalada xeebaha ayaa badbaadiyay 15 qof, iyagoo sidoo kale adeegsanaya Helicopters ayay raadinayaan 3 qof oo kale oo la layahay.
Sawirka ayaa muujinaya Wiilka yar oo maydkiisu yaalo xeeliga biyaha badda kadib markii uu soo caariday,waxaana qaaday Askari Turki ah. Meesha uu ku soo caariday ayaa ka mid ah goobaha dalxiiska.
Wargeysyada Ingiriiska iyo warbaahinta caalamiga ah ayaa walaac xooggan ka muujisay muuqaalka sawirkan iyo siday aadanimada uga baxsan tahay dhibaatada haysata dadka Yurub beegsanaya ee dhibaatooyinka dagaalka ka yaacaya.